Qaboojiyaha Korantada Basaska Korantada ee warshadda Korantada Double Double Decker | SONGZ
Shayga wuxuu ka kooban yahay kombaresarada, kondenser, miiraha qalalan, waalka balaarinta, uumiyaha, dhuumaha iyo qeybaha korantada.
Wax soo saarku wuxuu u qaybsan yahay fasallo dhawr ah iyadoo loo eegayo noocyada kala duwan iyo cabirka cutubyada isku aaddan. Marka loo eego qaab-dhismeedka, waxay badanaa u kala baxaan noocyo isku-dhafan iyo nooc kala jaban.
JLE Taxanaha, oo loogu talagalay 10-12m buskad laba jibaaran, loo habeeyay
Faahfaahinta Farsamada ee Double Double Decker Bus A / C JLE Taxanaha:
48 kW ama 163776 Btu / h
42 kW ama 143304 Btu / h
16000 m3 / saac (8)
6000 + 6000 m3 / saac (6 + 6)
Hawo nadiif ah
1100 m3 / saac
750 (L) × 2000 (W) × 1129 (H) + 800 (L) × 1800 (W) × 377 (H)
Isticmaalka Awoodda Qaboojinta
Isticmaalka Awoodda PTC
1. Qaboojiyaha waa R407C.
2. Qaybta-qaboojiyaha guud ahaan waxaa lagu rakibay mashiinka dambe, waana in loo tixgeliyaa rakibidda si loo wada jajabiyo guud ahaan, loona xareeyo dayactirka. Marinka hawada ee isku-xirka ku-meel-gaadhka ah ee u dhexeeya unugga iyo marinka hawada ee gaadhiga waa in si fudud loo rakibaa.
3. Waa in la hubiyaa in hawo hawo qaaduhu ay si habsami leh u gasho oo ay u dhammaysato dabaysha, iyo in qaadashada iyo hawo qaadashadu ay si wax ku ool ah u jaraan iyada oo aan dabayl iyo wareegga gaagaaban jirin. Xawaaraha dabaysha ee dhinaca gaariga waa inuu ahaadaa≤5m / s.
4. Marinka hawada ee isku-xirka ku-meel-gaadhka ah ee ka soo baxa qaybta qaboojiyaha ilaa marinka hawada ee baska ayaa leh qaab gaar ah, markaa naqshaddu waa inay si buuxda u tixgelisaa hawlgalka rakibidda oo ay yareyso iska caabinta marinka hawada. Xawaaraha dabaysha ee marinka kala-guurka waa inuu ahaadaa≤12m / s.
5. Xawaaraha dabaysha ee marinka hawada ee ugu weyn baska waa inuu ahaadaa ≤8m / s.
6. Waxaa ugu wanaagsan in si gooni gooni ah loo dejiyo shaashadda soo celinta hawada iyadoo loo eegayo saamiga mugga hawada ee dabaqyada sare iyo hoose. Ama si gooni ah ayaa loogu hagaajin karaa dabaqa sare, dabaqa hoose-na wuxuu hawada ku soo celiyaa jaranjarada.
6. Golayaasha xakamaynta korantada sida sanaadiiqda kontaroolada korontada iyo rogayaasha rogaya waxay fadhiyaan qadar cayiman oo gaariga dhexdiisa ah, waana in lagu tixgeliyaa meel hawo leh oo aan biyuhu oollin.
7. JLE-IIIB-T gadaal-dhajinta (kuleylka kuleylka oo lagu daray PTC) shaqeynta maaraynta kuleylka baytariga isku dhafan.
8. Fadlan nala soo xiriir sales@shsongz.cn si aad u hesho fursado iyo faahfaahin dheeraad ah.
Hordhac farsamo oo faahfaahsan oo ah Qaboojiyaha Basaska Taxanaha SZB
1. Qaab dhismeedka guud, oo lagu daro qolofka aluminium aluminium, waa mid cabbirkiisu weyn yahay oo miisaankiisu fudud yahay.
2. Tikniyoolajiyadda beddelaadda is-beddelka la-qabsiga waxay ogaaneysaa xaaladaha xawaaraha is-bedbeddelka isku midka ah ee kombaresaradayaasha iyo taageerayaasha, yaraynta isticmaalka tamarta ee shaqeynaya.
3. Horumarinta gaarka ah, naqshadeynta qaabdhismeedka, miisaan fudud.
4. DC marawaxad bilaa burush ah, cimri dheer iyo miisaan fudud.
Naqshadeynta bamka kuleylka, marka la barbardhigo isbeddelka caadiga ah, waxay ogaan kartaa kuleylka kuleylka kuleylka iyo yareynta isticmaalka tamarta.
6.CAN xakamaynta baska, iskudhafka keydka iyo asalka soo caanbaxa tikniyoolajiyadda isku xirka basaska.
7. Tikniyoolajiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ah
7.1. Shaqada "xakamaynta daruuraha", xaqiiji kontoroolka fog iyo ogaanshaha, iyo hagaajinta adeegga wax soo saarka iyo awoodaha kormeerka iyada oo loo marayo codsi weyn oo xog ah.
7.2. Tikniyoolajiyadda anti-dabacsan ee ku xiran danab sare
7.3. Hawlaha maaraynta kuleylka ee batteriga isku dhafan, sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha iyadoon saameyn ku yeelanaynin saameynta qaboojinta gaariga.
7.4. DC750V danab sare
Hore: Qaboojiyaha Korantada ee Baska iyo Tababaraha Korantada, Soo Celinta Hawada Labaad
Xiga: Nidaamka Maareynta Kulaylka Batariga ee Baska Korantada, iyo Tababaraha